Mamwe marobhoti ekutengesa anomhanya paLinux | Linux Vakapindwa muropa
5 marobhoti anoshanda nekutenda kuLinux
Kunyangwe akawanda madroni uye marobhoti razvino basa ndatenda ku LinuxMune ino chinyorwa tichaenda kunoverenga mashanu anonyanya kufadza semiautonomous marobhoti panguva iyo anoita zviito zvavo nekutenda kune penguin kernel uye yakavhurwa sosi mapurojekiti.
Kwete chete kune ma drones anoshanda nekutenda kuLinux, zvakare marobhoti epasi Ivo vanozviita, uye chakanakisa chinhu ndechekuti mamwe acho anogona kutengwa. Kunyangwe mitengo yavo ichiri yakakwira kune akawanda emapokisi edu. Uye kunyangwe Stephen Hawking naElon Musk vari kutya pamusoro penjodzi dzehungwaru hwekunyepedzera, idzo dzavainadzo, ivo vachiri vasina AI yekumisikidza dambudziko.
Kusvika vasvika pakuva vakazvimiririra, izvo zvinotora ..., uye kuve ne AI yakakwana kunetseka kuve nenjodzi, unogona kunakidzwa nemarobhoti aya pasina kunetseka nezve chero chinhu. Mazhinji emarobhoti aya anogona kuita kuti hupenyu hwako huve nyore, kuita mabasa akatenderedza imba.
Kana iwe uchida kuona rondedzero Pamarobhoti mashanu atiri kutaura nezvazvo, anotevera:
iRobot Ava 500: irobhoti iyo inogona kufamba uye ine skrini kupa telepresence sevhisi kune avo vanofanirwa kuve varipo vasina kuvapo. Mutengo waro wakakwira chaizvo uye handifunge kuti vazhinji venyu vanogona kuwana imwe pamba, vachisiya mashandisiro ayo kumunda webhizinesi.
SoftBank & Aldeberan Mhiripiri: Iri robhoti rine humanoid rinogona kuita mamwe mabasa anonakidza, kubva pakuita mabharani muchitoro cheNestlé kusvika pakuva shamwari yako yepamwoyo. Chimwe chezvinhu zvinonyanya kufadza ndechekuti inogona kuona manzwiro uye kubata hurukuro.
Savioke SaviOne: irobhoti yemakamuri masevhisi anogona kuita sevashandi kuhotera. Iye mubatsiri mukuru wehotera uyo mune ramangwana anogona kusiya vashandi vazhinji muchikamu ichi mumutsetse wekushaikwa kwemabasa.
MetraLabs / GS4 Scitos A5- Imwe robhoti mbozhanhare inogona kuita masevhisi enharaunda. Yakagadzirwa nekambani yeGerman MetraLabs GmbH, inozivikanwa uye yakakosha yekuvandudza emabhizimusi uye ekutengesa marobhoti.
Unbounded Robotic UBR-1: irobhoti rine ruoko runogona kuita mabasa risinganeti. Unyanzvi hwake hunomutendera kuti aite mabasa akadai sekumisa tafura, kunwa zvinwiwa, kuburutsa kana kurodha ndiro kubva kune yekuwachira, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » 5 marobhoti anoshanda nekutenda kuLinux
Trunk, iyo robhoti iri pabutiro ndiyo "Q.bo" pamwe inotengeka zvakanyanya uye ndiyo yakabatana zvakanyanya neLinux, uye hausi kutaura nezvazvo!?
Pindura kuna Maximus